အီရတ်ရှိ အမေရိကန်သံရုံးတိုက်ခိုက်ခံရ - People Media Myanmar
Home အီရတ်ရှိ အမေရိကန်သံရုံးတိုက်ခိုက်ခံရ
နိုင်ငံတကာ၊ ဇန်နဝါရီ – ၂
အီရတ်အခြေစိုက်ဟစ်ဇ်လိုလာစစ်သွေးကြွအဖွဲ့ကို ပြန်လည်လက်စားချေတဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် အမေရိကန်ရဲ့ ဒုံးကျည်ပစ်ခတ်မူတွေနောက်မှာပဲ ရာနဲ့ချီတဲ့ အီရတ်ဆန္ဒပြသမားတွေဟာ အီရတ်နိုင်ငံ ဘတ်ဂ်ဒတ်မှာရှိတဲ့ အမေရိကန်သံရုံးကိုဝင်စီးဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။
ဆန္ဒပြသမားတွေက အမေရိကန်ဆန့်ကျင်ရေးဆောင်ပုဒ်တွေကို ကြွေးကြော်ကာ သူတို့မြေမှအမေရိကန်တွေ ထွက်သွားဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြသလို သံရုံးတံတိုင်းကိုလည်း ဖြိုချဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးခြံဝင်းကို ဖြတ် ကျော်ပြီး လူ ၂၀ ကျော်လောက်အထိ သံရုံးအဆောက်အဦးထဲ ဝင်သွားနိုင်ခဲ့ပေမယ့် အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ မျက်ရည်ယိုဗုံးနဲ့ လူစုခွဲမှုတွေကြောင့် ပြန်လည်ထွက်ခွာလာခဲ့ရပါတယ်။
အီရတ်ဝန်ကြီးချုပ်အဒူလ် မက်ဒီကတော့ ဆန္ဒပြသမားတေရဲ. ကျူးကျော်မှုကိုချက်ချင်းထိန်းချုပ်ဖို့ တပ်ဖွဲ့ဝင် အများအပြား ချက်ချင်းစေလွှတ်ခဲ့ကာ သံတမန်ရပ်ကွက်ကို တိုက်ခိုက်ခြင်းက ရာဇဝတ်မူဖြစ်ကြောင်း ရှုတ် ချခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ ဒီလုပ်ရပ်ကိုနောက်ကွယ်ကထောက်ပံ့ပေးနေသူ အီရန်လို စွပ်စွဲထား ကာ ဒီအတွက်ကြောင့် ကြီးကြီးမားမားပြန်လည်ပေးဆပ်ရမယ်လို့လည်း ချက်ချင်းတုန့် ပြန်လိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးမာ့ခ်အက်စ်ပါကတော့ အီရတ်ကို အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၇၅၀ တပ်ဖြန့်ချထားဖို့ ချက်ခြင်းကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
အီရတျအခွစေိုကျဟဈဇျလိုလာစဈသှေးကွှအဖှဲ့ကို ပွနျလညျလကျစားခတြေဲ့ ဒီဇငျဘာ ၃၁ ရကျ အမရေိကနျရဲ့ ဒုံးကညျြပဈခတျမူတှနေောကျမှာပဲ ရာနဲ့ခြီတဲ့ အီရတျဆန်ဒပွသမားတှဟော အီရတျနိုငျငံ ဘတျဂျဒတျမှာရှိတဲ့ အမရေိကနျသံရုံးကိုဝငျစီးဖို့ ကွိုးစားခဲ့ကွပါတယျ။
ဆန်ဒပွသမားတှကေ အမရေိကနျဆနျ့ကငျြရေးဆောငျပုဒျတှကေို ကွှေးကွျောကာ သူတို့မွမှေအမရေိကနျတှေ ထှကျသှားဖို့ တောငျးဆိုခဲ့ကွသလို သံရုံးတံတိုငျးကိုလညျး ဖွိုခဖြို့ကွိုးစားခဲ့ပါတယျ။ နောကျဆုံးခွံဝငျးကို ဖွတျ ကြျောပွီး လူ ၂၀ ကြျောလောကျအထိ သံရုံးအဆောကျအဦးထဲ ဝငျသှားနိုငျခဲ့ပမေယျ့ အမရေိကနျတပျဖှဲ့တှရေဲ့ မကျြရညျယိုဗုံးနဲ့ လူစုခှဲမှုတှကွေောငျ့ ပွနျလညျထှကျခှာလာခဲ့ရပါတယျ။
အီရတျဝနျကွီးခြုပျအဒူလျ မကျဒီကတော့ ဆန်ဒပွသမားတရေဲ. ကြူးကြျောမှုကိုခကျြခငျြးထိနျးခြုပျဖို့ တပျဖှဲ့ဝငျ အမြားအပွား ခကျြခငျြးစလှေတျခဲ့ကာ သံတမနျရပျကှကျကို တိုကျခိုကျခွငျးက ရာဇဝတျမူဖွဈကွောငျး ရှုတျ ခခြဲ့ပါတယျ။
အမရေိကနျသမ်မတဒျေါနယျထရနျ့ကတော့ ဒီလုပျရပျကိုနောကျကှယျကထောကျပံ့ပေးနသေူ အီရနျလို စှပျစှဲထား ကာ ဒီအတှကျကွောငျ့ ကွီးကွီးမားမားပွနျလညျပေးဆပျရမယျလို့လညျး ခကျြခငျြးတုနျ့ ပွနျလိုကျပါတယျ။
အမရေိကနျကာကှယျရေးဝနျကွီးမာ့ချအကျဈပါကတော့ အီရတျကို အမရေိကနျတပျဖှဲ့ဝငျ ၇၅၀ တပျဖွနျ့ခထြားဖို့ ခကျြခွငျးကွငွောခဲ့ပါတယျ။
« နှစ်သစ်ကူးညတွင် မုံရွာမြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံ၌ လူနာ ၆ ဦးရောက်ရှိ
နိုင်ငံခြားသားဖြူနီကြောင်ကျားများ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုစေ သာအကြောင်းအရာစုံဖြင့် ဝင်ထွက်သွားလာနေရာ ဇာတိပုည၊ ဂုဏ်မာန အထူးလိုအပ်ကြောင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဗဟိုအတွင်းရေးမှူးပြောဆို »